Rooble oo kormeeray Xarunta Xiriirka Dadweynaha ee 449 (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Rooble oo kormeeray Xarunta Xiriirka Dadweynaha ee 449 (SAWIRRO)
Rooble oo kormeeray Xarunta Xiriirka Dadweynaha ee 449 (SAWIRRO)
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kormeeray Xarumaha Xiriirka Dadweynaha 449, oo ka shaqeeya isku xirka shacabka, goobaha caafimaadka iyo Guddiga Naf-badbaadi ee ka hawlgala xarumaha dowladda, ay u qorsheysay la tacaalidda COVID-19.
Howlwadeenada Caafimaadka ee ku sugnaa Isbitaalka Banaadir ayaa u badan dhalinyaro, Xeeldheereyaal Soomaaliyeed oo dhanka caafimaadka ah iyo culimo si mutadawacnimo ah ugu adeegaya dadka Soomaaliyeed, iyagoo tallooyin siiya dadka la soo xiriira talooyin iyo gurmad la xiriira habka la tacaalidda cudurka COVID-19.
Dhalinyarada ka hawlgasha Xarunta Xiriirka Dadweynaha COVID-19 ayaa Ra’iisal Wasaaraha uga warbixiyay hawlaha ay qabtaan, waxa ayna tilmaameen in wicitaanada ugu badan ay ka yimaadaan gobolada dalka, ayna Caasimadda soo yaaranayaan, halka guddiga naf-badbaadi u soo gudbiyeen hawlaha u qabsoomay.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa ku ammaanay dhalinyarada ka hawlgasha xarunta sida mutadawicnimada ah ee ay waqtigooda ugu hurayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed, xiligaan uu dhibaatada xoogga leh ku hayo dalka xanuunka COVID-19.
“Dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabadho ayaa ka hawlgala xaruntan waxay u taagan yihiin 24-ka saac, sidii ay ummadda Soomaaliyeed ugu caawin lahaayeen talooyinka ay u baahan yihiin, waana uga mahadcelinaynaa kaalintaas ay buuxiyeen.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeeed in ay muujiyaan feejignaaan dheeri ah, maadaama uu xanuunku soo labo kacleeyey ayna racaan tilmaamaha caafimaad.
Previous articleBeesha Caalamka oo farriin u dirtay Madaxda Soomaalida
Next articleWasiir Dubbe oo ka hadlay shirka Dowladda Federaalka & D/goboleedyada